Home ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ စီးပွားရေးသတင်း ဆောင်းပါး မြန်မာနှင့် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ သတင်းပြည်တွင်းသတင်း ဒေသန္တရသတင်း ပြည်သူ့အသံ ကမ္ဘာ့သတင်း ကြားဖြတ်နှင့် သတင်းအကျဉ်း ရသသတင်း နာရေးသတင်း အားကစားသတင်း အမှားပြင်ဆင်ချက် အင်တာဗျူး အထူးကဏ္ဍပြည်သူ့စစ်သား သုတေသနနာဂစ် ၁ နှစ်ပြည့် အမေရိကန် ပေါ်လစီနှင့် မြန်မာရေးရာ ကမ္ဘာ့ ဘဏ္ဍာရေး အကျပ်အတည်း ၈ လေးလုံး အထူး အာဇာနည်နေ့အထူး အမေဒေါ်အမာ အထူး ဆန္ဒခံယူပွဲအထူး ကမ္ဘာ့ဖလား ၂၀၁၀ မြစ်ဆုံ ရေကာတာ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲရွေးကောက်ပွဲ သတင်းဖြစ်စဉ်များ ရွေးကောက်ပွဲတွင်း တင်ဆက်မှု ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်လိုသူများ ရွေးကောက်ပွဲ မဝင်သူများ ပါတီအကြောင်း သိကောင်းစရာ ရွေးကောက်ပွဲ အထူး လွတ်မြောက်မှုသို့ သိုမှီးရာရန်ကုန်နှင့်မုန်တိုင်း မြန်မာပြည်နှင့် သက်ဆိုင်သော ကြေးနန်းများ အိုဘားမား မြန်မာ ခရီးစဉ် အာဘော်နှင့်အမြင်ဆောင်းပါး အယ်ဒီတာ့ထံပေးစာ အယ်ဒီတာ့အာဘော် သဘောထားအမြင် ညွှန်းဆိုရာ ရသဘဏ်တိုက်ကဗျာ ပြဇာတ် စာအုပ်စင် ရုပ်ရှင် ခရီးသွားဆောင်းပါး မားလ်တီမီဒီယာဗီဒီယို Photo EssayPhoto Essay. ဓါတ်ပုံ ကာတွန်း ဂျာနယ် မဇ္ဈိမ ရေဒီယို မဇ္ဈိမတီဗီRFA & Mizzima TV Voter Voices Mizzima TV Weekly: Business News ကြေညာချက် Home > သတင်း > ဒေသန္တရသတင်း > မြန်မာ့အကြွေးများ ဂျပန် လျှော်ပေးတော့မည်
မြန်မာ့အကြွေးများ ဂျပန် လျှော်ပေးတော့မည်	မဇ္ဈိမသတင်းဌာန	| ကြာသပတေးနေ့၊ ဧပြီလ ၁၉ ရက် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ၂၀ နာရီ ၅၃ မိနစ်	နယူးဒေလီ (မဇ္ဈိမ) ။ ။ မြန်မာအစိုးရက တင်ရှိနေသော ကြွေးမြီ ယန်း သန်းထောင်ပေါင်း ၃ဝဝ (ဒေါ်လာ သန်းပေါင်း ၃.၇ ထောင်)အား ဂျပန်အစိုးရက လျှော်ပစ်ရန်ရှိကြောင်း ဂျပန် Asahi Shimbun သတင်းစာကြီးက ရေးသားထားသည်။တရားဝင်သဘောတူညီချက်ကိုမူ ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ် Yoshihiko Noda နှင့် မြန်မာသမ္မတ ဦးသိန်းစိန်တို့ စနေနေ့တွင် တိုကျိုမြို့၌ တွေ့ဆုံ၍ ဆုံးဖြတ်မည်ဖြစ်ကာ ‘အပြည့်အဝ’အကူအညီများလည်း ပြန်လည်ပေးအပ်တော့မည်ဟု ဂျပန်အရာရှိများအား ကိုးကား၍ ရေးသားထားသည်။၂၅ နှစ်ကြာ ရပ်ဆိုင်းထားသည့် အကူအညီများကို မြန်မာအစိုးရ၏ ဒီမိုကရေစီအရေး ကြိုးပမ်းလုပ်ဆောင်မှုများအရ ဂျပန်အစိုးရက ဤကဲ့သို့ ပြန်လည်စတင်ခြင်းဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။၂ဝ၁၁ နိုဝင်္ဘာလာအတွင်း ဂျပန်အရာရှိများ မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်စဉ် ကတည်းက ဖွံ့ဖြိုးရေး အကူအညီများနှင့် ပတ်သက်၍ မြန်မာအရာရှိများနှင့် ဆွေးနွေးမှုများ စတင်ခဲ့ကြောင်း ဂျပန်ဝန်ကြီးများအဖွဲ့ အတွင်းဝန်ချုပ် Osamu Fujimura က ပြောသည်။ပထမအဆင့်အနေနှင့် ယန်းသန်းပေါင်း ၁၂၇.၄ ထောင်အား လျှော်ပစ်ရန်ရှိပြီး ၎င်းမှာ ၂ဝဝ၂ ခုနှစ်ကတည်းက သဘောတူညီခဲ့သော်လည်း ၂ဝဝ၃ ခုနှစ် မေ ၃ဝ ဒီပဲယင်းအရေးအခင်း ဖြစ်ပေါ်လာ၍ သဘောတူညီချက်ကို ရပ်ဆိုင်းထားခဲ့ရသည်။ထို့နောက် အတိုးငွေနှင့် ဆပ်ရန်နောက်ကျ၍ ဆောင်ရမည့်ဒဏ်ငွေ ယန်းသန်း ၁၇၆.၁ ထောင်အား လျှော်ပစ်နိုင်ရန် အတွက် နောက်ထပ် တနှစ်အတွင်း မြန်မာပြည် ဒီမိုကရေစီ တိုးတက်မှုအပေါ် အခြေခံသုံးသပ်ပြီးမှ လျှော်ပစ်မည်ဖြစ်သည်။အမှန်စင်စစ် မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဂျပန်နိုင်ငံအပေါ် ကြွေးမြီအဖြစ် ယန်းသန်းထောင်ပေါင်း ၅ဝဝ ခန့် တင်ရှိထားပြီးဖြစ်၍ ကျန်ငွေ ယန်းသန်းပေါင်း ၁၉၈.၉ ထောင်အား ပြန်ဆပ်နိုင်ရန်အတွက် ဂျပန်ဘဏ္ဍာရေးဌာနများမှ နောက်ထပ်ချေးငွေ သစ်များ ရယူရဦးမည် ဖြစ်သည်။ ဂျပန်အစိုးရအနေဖြင့်လည်း ထိုပမာဏခန့် ထပ်မံချေးပေးရန်ရှိကာ ထိုချေးငွေသစ်ပြန်ဆပ်ရက်ကိုလည်း တိုးချဲ့သတ်မှန်ပေးရန် ရှိသည်။တင်ရှိအကြွေးများအားလုံး ကြေလည်ရေးနှစ် နောက်ထပ်အကူအညီသစ်များ စတင်ရေးအတွက် ဦးသိန်းစိန်၏ ငါးရက်ကြာ ခရီးစဉ်အတွင်း ဆွေးနွေးကြမည် ဖြစ်သည်။၂ဝ၁၁ ခုနှစ် ဒီဇင်္ဘာလအတွင်းက ဂျပန်နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်စဉ် ဒီမိုကရေစီအရေး ဦးတည်သည့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ ပိုမိုတိုးတက်ပြုလုပ်ရန် မြန်မာအစိုးရအား တိုက်တွန်းတောင်းဆိုခဲ့သည်။ဂျပန် နိုင်ငံရေးခြားရေး ဝန်ကြီး ခိုအိချီးရိုး ဂင်းဘား Koichiro Gemba မြန်မာနိုင်ငံသို့လာရောက်စဉ် ၂ဝ၁၁ ခုနှစ် ဒီဇင်္ဘာ ၂၆ ရက်နေ့က တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့သည့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကလည်း ဂျပန်အကူအညီများနှင့် ပတ်သက်၍ “ကျမတို့ရဲ့ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေ အားလုံးကြားမှာ သွေးစည်းညီညွတ်မှုရှိဖို့အတွက်ကို လူသားမှုဆိုင်ရာ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေး ဆိုင်ရာ အကူအညီတွေပေးတဲ့အခါမှာ တိုင်းရင်းသား ဒေသတွေမှာလည်း တန်းတူရည်တူ ပေးဖို့ လိုတယ်ဆိုတာ လည်း ကျမရှင်းပြခဲ့ပါတယ်” ဟု ပြောဆိုခဲ့သည်။ဂျပန်အစိုးရ အနေဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး အကူအညီများ ပြန်လည်ပေးရေး ဆုံးဖြတ်ရန်အတွက် ဧပြီ ၁ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပမည့် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲအား တရားမျှတမှု ရှိ/မရှိ အနီးကပ် စောင့်ကြည့်နေမည်ဟု အတွင်းဝန်ချုပ် Osamu Fujimura က ဖေဖေါ်ဝါရီလအတွင်း ပြောဆိုခဲ့ဖူးသည်။
နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးမှုများ အဆင့်သုံးဆင့်ဖြင့် လုပ်ဆောင်သွားမည်	ဂျပန်က စီမံချက် သုံးမျိုးအတွက် မြန်မာကို ဒေါ်လာ ၃၂ သန်းခန့် ကူညီပေး	ဝယ်လိုအား ရှိနေ၍ ဒေါ်လာ ဈေးမြင့်တက်လာ	အိန္ဒိယ ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် မြန်မာသမ္မတတို့ သီးသန့်တွေ့ဆုံ	သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အား အိန္ဒိယ လုပ်ငန်းရှင်များက ညစာစားပွဲဖြင့် ဧည့်ခံမည်	ဦးသိန်းစိန် ဖိတ်ကြားချက်အရ OIC အတွင်းရေးမှူးချုပ် မြန်မာပြည် လာမည်	ဦးသိန်းစိန် အိန္ဒိယ မလာမီ နယူးဒေလီရှိ မြန်မာများ ကြိုတင်ဆန္ဒပြ	Who is Online
We have 298 guests online	www.bysjl.com	© Copyright 1998 - 2012 Mizzima News. All Rights Reserved